“ကျစ်လစ်သိပ်သည်း utility ကိုလယ်ထွန်စက်ကိုအသုံးပြုဂျွန်မင်မြက်ခင်းလယ်ထွန်စက် |ရောင်းချတဲ့သူဆရာယောဟနျသမင်ဆေးသုတ်” – Tractor Loader
Posted on October 4, 2018 by Ross Hurley
“ကျစ်လစ်သိပ်သည်း utility ကိုလယ်ထွန်စက်ကိုအသုံးပြုဂျွန်မင်မြက်ခင်းလယ်ထွန်စက် |ရောင်းချတဲ့သူဆရာယောဟနျသမင်ဆေးသုတ်”
ခွဲစိတ်ကုသခံထားသော လူနာထံ ဆရာဝန် လာကြည့်သည်။”ခင်ဗျားကို သတင်းသုံးခုပြောစရာရှိတယ်၊ တစ်ခုက မကောင်းတဲ ့သတင်း၊နောက်တစ်ခုက ကောင်းတဲ ့သတင်း၊ အဲ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အကောင်းဆုံးပဲ၊ မကောင်းတဲ ့သတင်းက စပြောမယ်၊မဖြတ်ရမဲ ့ခင်များခြေထောက်ကို ကျွန်တော်တို ့မှားဖြတ်မိတယ်၊ကောင်းတဲ ့သတင်းကတော ့ဖြတ်ရမယ် ့ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်တို ့ထပ်ဖြတ်ပေးမယ်….အဲ …..အကောင်းဆုံး သတင်းကတော့ဘေးခန်းက လူနာက ခင်းဗျားရဲ ့ရှူးဖိနပ်ကို သူဝယ်မယ်တဲ ့”
Gidroprokola အားသာချက်များ – ရည်ညွှန်းအကျင့်ကိုကျင့်၏ဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပညာရေး၏ထိုးဖောက်မှု၏အတော်လေး vys.okaya နှုန်း (30 အထိမီတာ / ပြောင်းကုန်ပြီ) ။ သိသာထင်ရှားသောအားနည်းချက်များကြောင့်ပြုပြင်တွင်းညစ်ညမ်းမှုဖို့ဒီဇိုင်းဝင်ရိုးနှင့်အခက်ခဲအလုပ်လုပ်အခြေအနေများကနေဖြစ်နိုင်သမျှသွေဖီထိုးဖောက်မှု၎င်း၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရှည် (20-30 မီတာ) ရှိပါတယ်။
ပိုက် jacking အခါ, တစ်ဦးကို manual ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြေဆီလွှာများနှင့်အတူကွန်ကရစ်ကွင်းနှင့်အခြားဒြပ်စင်များပြွန် (စုဆောင်း) အတွင်း၌အလုပ်လုပ်နေဖို့သူတို့ရဲ့အချင်းထက်နည်း 1200 မီလီမီတာ, ပိုက်လိုင်းအတွင်းမပို 1 ထက်တစ်နာရီအလုပ်လုပ်စဉ်ဆက်မပြတ်နေထိုင်တစ်အရှည်မှာအရှည် 40 မီတာလျှင်, (ကိုက်နှုန်းကဲ့သို့) ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မိနစ် 30 ထက်မနည်း၏သံသရာအကြားကြားကာလနှင့်အတူ။ ကျော်ကို 10 မီတာပိုက်လိုင်းအရှည်တစ်အတင်းအဓမ္မလေဝင်လေထွက်စနစ်ကလေခတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ မြေဆီလွှာ၏လက်စွဲဒီဇိုင်းနှင့်အတူလာကြတယ်ပြွန်သာလုပ်ကြံ, ဓာတ်ငွေ့, မိလ္လာနှင့်လုပ်သားများနှင့်အတူ bidirectional ဆက်သွယ်ရေးသေချာရေအောင်မြင်မှုများထုတ်ပယ်ထားတဲ့အခြေအနေများအောက်တွင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြွန်အတွင်း၌မြေဆီလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ဖြင့်၎င်း၏မြေဆီလွှာကိုကျော်လွန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, အဓါးရဲ့အရှည်ထက်မနည်းဖို့ပိုက်အဆုံးမြေပြင်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှသာကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တားမြစ်သည်။
ဟော်ရီကာချာ၏မော်စကိုဒေသကြီး Institute ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးပါမောက္ခ Yuri Bykovskii သင့်လျော်သောနည်းပညာမဟုတ်သာ “စက်မှုလုပ်ငန်း” ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်စဉ်းစားအဘယ်သူ၏ဧရိယာ 2-3 ဟက်တာထက်မပိုပါဘူးအိမ်တွင်း, ဥယျာဉ်မှူး,.
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှု 14 စတီယာရင်နဲ့ 10 နို့ထွက်နွားတွေအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်များ 24 ဦးခေါင်း, ပါရှိသောအရာ KFH အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစတိရစ္ဆာန်အခြား 50 ဦးခေါင်းတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကို 1400m2 ၏နောက်ထပ်ဝုဏ်၏ဆောက်လုပ်ရေးစီစဉ်ထားသည်။
win: ဆရာ remote နဲ့တျခားေနရာကေန ကုိယ့္ကြန္ျပဴတာ ကုိ ၾကည့္ပီး ျပင္ေပးရင္ ေနာက္တစ္ခါ ကုိယ့္ကြန္ျပဴတာ ကုိ သူ ၀င္ၾကည့္လုိ ့ရနုိင္ပါသလား နားမလည္လုိ ့သင္ၾကားေပးပါေနာ္ ။ ကုိယ့္ကြန္ျပဴတာကုိ သူ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ 17 O
အစွမ်းထက် KamAz 740.31 240 turbocharged နှင့် intercooled လေထုအအေးတပ်ဆင်ထားပါဝါယူနစ် 45143 ထရပ်ကားဒီဇယ်အင်ဂျင်အဖြစ်။ KAMAZ 45143 ထရပ်ကားအင်ဂျင်ဥရောပမှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်သောယူရို-2 ဂေဟစနစ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကိုလိုက်နာရမည်။ အများဆုံးအင်ဂျင် output ကို 240 မြင်းကောင်ရေနှင့်အင်ဂျင် KAMAZ 45143 10,85 လီတာ၏လေဖြတ်အသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်သို့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာ ထိုးဖောက်အောင်မြင်လာသောအိန္ဒိယ နိုင်ငံထုတ် FARMTRAC ထွန်စက် ထုတ်လုပ်သူများက လာမည့်နှစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ဝေစု အများဆုံးရရှိရေးကြိုးပမ်းပြီး ဈေးကွက်ဦးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖေဖော်-ဝါရီ ၁၆ ရက်၌ ပြောဆိုသည်။
မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အသီး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြာချိန်ပေးမှန်ကန်စွာများအတွက်အချိန်ကိုက်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အသီး ripening အဖြစ်အချိန်မီထုံးစံ၌ရိတ်သိမ်းစိုက်ပျိုးသီးနှံ။ အဆိုပါအားလုံးသဘောကျ 100% နီးစပ်သည့်ကုန်စည်တစ်ဦးတည်းအချိန်အခကြေးငွေပေးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအစောပိုင်း-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမျိုးပေါင်းလက်ရှိရှိပါသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုများတွင်ရွေးချယ်သီးသောအသီးတှငျရငျ့မှညျ့, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဆေးများ, မီဒီယာ-nepozdno မျိုးစေ့ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ်ဖယ်ရှား – တစ်ခါသုံး။
အကာအကွယ် Case (Case) အတွက်သံမဏိပိုက်အသုံးပြုကြသည်: Hot-ရှင်းပြီချောမွေ့စွာ, welded နှင့်လိမ် seaming welded ။ hot straight- welded 273 မီလီမီတာအထိများနှင့်အရွယ်အစားပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးမားအသုံးပြုသောကြီးမားသော-အချင်းပိုက်လိုင်းများအဘို့ကိုသာအမှုဖြတ်အချင်းများအတွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရန်ပုံငွေပေးအပ်ပွဲတွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် က ရန်ပုံ ငွေပေးအပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရေကန်ဘောင် အဆင့်မြှင့်တင် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးမြတ်ကိုကို က ရေကန်ဘောင်တူးဖော်ခြင်း၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဝန်ကြီးချုပ်က ရေကန်ဘောင်အဆင့်မြှင့်တင်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း(၁၀ဝ၀)ကို လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ရာ ရေကန်ဘောင် အဆင့်မြှင့် တင်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌ က လက်ခံရယူခဲ့သည်။
တစ်ဦးရှေ့ပြေးအပေါက်တူး (100 မီလီမီတာအချင်းမှတက်, mini ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း) ဖျော်ဖြေနေသည်။ အစပိုင်းမှာတူးဖော်ခြင်းသွေဖည်ခြင်းနှင့်အလျားလိုက်ရေတွင်းများ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအတိမ်အနက်ကိုဝင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၌တည်သော 10-20 ဒီဂရီတစ်ခုထောင့်မှာစတင်လိုချင်သော parameters တွေကိုမှချိန်ညှိနေသည်.
အဆိုပါ Kamas မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ 6520 တစ်ပုံစံတီထွင်ထားပြီးထိုကွောငျ့, KAMAZ 6520 ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာလေးခြောက်ခြင်းဖြင့်ယခင်မော်ဒယ်များထက်ပိုကြီးတဲ့, ထိုသို့များအတွက်ဘီးပုံသေနည်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာခမ်းနားအလုပ်သမားမဆိုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။ : က၎င်း၏ဒီဇိုင်းကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများဖြစ်ပါသည်
ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံ သားမ်ား အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ ပိုင္ သတင္းစာ တိုက္ မ်ားမွ ထုတ္ေဝ ေသာ ေန႔စဥ္ သတင္းမ်ား ကို ဖတ္႐ႈ နိုင္ရန္ မွ်ေဝ ေပး လိုက္ ပါတယ္။ ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။ ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။ ဘာ << SKIP AD >>…
အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းခေါင်းကိုတစ် transmitter ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာရေဒါမှအချက်ပြမှုများကိုပို့ပေးဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဓိကတာဝန်အော်ပရေတာနှင့်အတူတည်ရှိသည်။ ဒါဟာတစျခုလုံးကိုတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်, ဦးခေါင်း၏အနေအထားထိန်းညှိ။ မိမိအတာဝန် – စီမံကိန်းလမ်းကြောင်းကနေကျင်းပေါက်၏သှဖေကာကွယ်တားဆီးဖို့။ အလျားလိုက် directional တူးဖော်ခြင်း – အလိုအလျောက်၏မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကို။ ဒီနည်းလမ်းကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်တိကျသောစီမံကိန်းနှင့်ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်သည်။
ဝေးအဓိကပိုက်ကဏ္ဍများအနေဖြင့်ကြက်။ ကျနော်တို့ကွန်နက်ရှင် fittings ကိုသွားသင့်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကိုင်းအခက်များနှင့်ထောင့်လျော်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပိုက်ဖြတ်တောက်ရှေ့တော်၌ထိုချုပ်ရိုး၏ဒြပ်ပေါင်းများပေါ်တွင်အခြေခံရွေးချယ်ထားသည်။ ဒါဟာအလုပ်ရဲ့အဆုံးမှာဆိုက် connection ကိုခေါက်အမျိုးအစားပေါ်များ၏စွက်ဖက်မှုများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများပေါ်လာမအရေးကြီးပါသည်။
Previous PostPrevious “معدات زراعية للبيع -جون دير في”
Next PostNext “comprar John Deere la105 |modelos john deere”